Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan iPhone
Sida loo joogto ah Delete Call History on iPhone
3 Siyaabaha Delete iPhone Data oo aan laga badinin jailbreak
Sida loo masixi iPhone Taariikhda
Sidee oo bilaash ah ilaa Kaydinta "Documents iyo Data" on iPhone
The World ayaa 1-dii iPhone iyo iPad Data Recovery Software
Si aad u dajiyaan xiriirada ka MSOutlook profile aad iPhone, waxaad kala soo bixi kartaa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo qalab heer sare ah dhinac saddexaad lagu talinayaa magacaabay MobileGo Read More >>
Top 10 Apps difaaca Privacy On iPhone
Badanaa barnaamijyadooda la isticmaalay si loo sugo xogta shakhsiga ah ula xiriiraan aagga bulshada sababtoo ah qof walba oo inta badan isticmaala noocan oo kale ah barnaamijyadooda iyo website-yada ee qalabka ay si aad ula xiriirto others.There a doonaa Read More >>
10 Best iPhone Photo Daabacado in Print Photos tayo sare leh oo ka iPhone
Haddii aad raadineyso weeyna ah printer sawir iPhone, markaa waa in aad soo qaado mid ka mid ah oo sawiro tayo sare leh bakhtiin doonaa. Halkan waxa ku jira 10 ugu fiican madbacadaha iPhone sawir aad qaadi karto tixraac. Read More >>
Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sida in aad iPhone ama aad u hesho iPhone ka mid ah hab DFU ku qasabno yar. Hubi in wixii faahfaahin ah hadda! Read More >>
2 daqiiqo in aad iPhone ama ka bax Recovery Mode
xayiran iPhone in hab kabashada? Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa 2 siyaabo sahlan si aad u hesho iPhone ka mid ah Recovery Mode. Read More >>
Solutions in celi farriinta codka Password on iPhone (AT & T iyo Verizon)
Ilowday aad horay looduubay password iPhone? Ha ka werwerin in. Waxaa jira siyaabo dhowr ah la heli karo si dib iPhone farriinta codka Passwordkaaga (AT & T iyo Verizon). Read More >>
Quick Fix 'Space gelin ku filan aan iPhone soo celinta ee kaabta'
Hel 'ma ku filan boos lacag la'aan ah' heegan aad iPhone in la soo celiyo ka gurmad Lugood? Maqaalkani waxa uu bixiyaa aad degdeg ah go'an in Lugood ayan soo celin kara iPhone sababta oo ah ka maqan meel ku filan oo lacag la'aan ah ku iPhone. Read More >>
Sidee si ay u gudbiyaan ka iPhone in Android
Sidee in ay beddelaan macluumaadka ka iPhone in Android? Maqaalkani waxa uu ku hanuunin doonaa inaad sameeyo hab fudud oo wax ku ool ah. Read More >>
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Android inay iPhone 6 / iPhone 6 Plus
Sida loo xogta laga Android wareejiyo iPhone? Maqaalkani waxa uu u ururiyaan, jidadkooda oo dhan ee aad ku wareejin content oo dhan ka phone Android inay iPhone. Read More >>
Sida loo Gebi qaab iPhone
Ma doonaysaa in qaab aad iPhone u gadista? Maqaalkani waxa uu idin ​​tusiyo, hab fudud oo la mid ah oo kaliya click, oo aad qaab kartaa iPhone gabi ahaanba. Hubi in hadda! Read More >>
Sida loo Delete iPhone Data Ka hor inta Iibinta
Ha ogolaan in iPhone hor iibiyo, si ay u dhawrto macluumaad gaarka kuu ah in la xaday, qodobkan wuxuu kuu sheegayaa sida ay u tirtirto xogta iPhone gabi ahaanba ka hor inta iibiyo. Read More >>
Sida loo ogolaan in si buuxda iPhone
Sidee in ay gabi ahaanba tirtiri iPhone ah: xiriiriyaan iPhone la computer> isticmaalka Wondershare SafeEraser ee feature masixi All Data. Read More >>
Sida loo Delete Photos ka iPhone
Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa sida ay u tirtirto sawiro ka iPhone, ay ka mid yihiin sidii ay u tirtiri sawiro oo la soo doortay, sida ay u tirtirto dhammaan sawiro ka iPhone, iyo sida ay u tirtirto sawiro si joogto ah. Read More >>
Ma waxaad doonaysaa si loo yareeyo xajmiga sawir iPhone? Hadda barnaamijyadooda iyo aad u badan u iPhone ogolaado in aad sameeyo. Fiiri ugu fiican 5 Apps si loo yareeyo xajmiga sawir iPhone. Read More >>
Sida loo ogolaan in aad iPhone Ka hor inta Iibinta Waxaa
Waxaad lahaa wanaagsan aad iPhone kula sano, iyo waqtiga ayaa ugu dambeyntii soo si aad u iibiyo. Read More >>
Sidoo kale waa run in files junk qaadan kartaa nooc kasta oo gudahood aad iPhone iyo waxa muhiim ah in aad haysato telefoonka lacag la'aanta ah ee files junk kuwan. Read More >>
Sidee loo nadiifiyaa iPhone Kaydinta
Tani waa sababta aan la haynin kaydinta ku filan si dhab ah xaqiro kartaa shaqo ee aad iPhone oo keeni karta in qaab saboolka ah. Read More >>
Sida loo soo saar Dhamaan Data ka iPhone
Waxaan aad ugu boorinayna in aad la abuuro gurmad ah ee aad iPhone isticmaalaya muujinta gurmad on iCloud ama Lugood si aad awood u leedahay dib u soo ceshano wixii macluumaad ah. Read More >>
Sida loo dardar Your iPhone 4 / 4s / 5 / 5S / 6 / 6Plus
Isku day ay doonayso in ay caawiyaan ilaa aad dardar aad iPhone, waxaan doonayaa in aan eegno siyaabo dhowr ah inay sidaa sameeyaan, waayo, dhamaan noocyada iPhone. Aan ku bilaabaan 4. iPhone Read More >>
PhoneClean Alternative: Sidee loo nadiifiyaa iPhone ee 1-click
Qalab A si loo hubiyo in aad iPhone weli gaarka loo leeyahay waa PhoneClean. PhoneClean si fiican uu baaritaanku aad iPhone si aad u hesho dhammaan xogta aad. Read More >>